Ungasusa kanjani i-bang
Zikhona yini abesifazane abangathandi ukushintsha? Ngezinye izikhathi kwenzeka ekuphileni esikhathini esinjalo lapho ufuna ngempela ukuzwa ukushisa kwamandla amasha, ushintshe konke, futhi okungcono kube ngcono, kahle, uma kungenjalo konke, okungenani okungenani izinwele zakho. Futhi uma ungaqapheli ukushintsha ukubukeka kwakho ngokujulile, khona-ke ungaqala ukuzama umshanelo.
I-Cholka iyinhlangano yokuzikhethela kodwa ebalulekile yezinwele eziningi nezinwele zezinwele. Ngezinye izikhathi ukuma kwayo kungashintsha ngokuphelele ukubonakala komuntu. Kodwa yini okufanele uyenze uma ama-bangs ekhula futhi eba endleleni noma nje evelele? Indlela elula yokukhipha ibanga ebunzini lakho ngaphandle kokusebenzisa izindlela eziyinkimbinkimbi iyindilinga, umgqomo noma ibhande, lapho ungasusa khona izinwele ezigcwele noma eziboshiwe. Ungababulala futhi ngokungabonakali. Ngendlela, uma unezinwele ezinzima, awukwazi ukususa lonke i-bang futhi, ukudala umphumela omncane, uzame nokunye. Kodwa kungani ungazami ezinye izindlela ezizokuvumela ukuba uthole ikhanda elisha elithakazelisayo?
Uma ucabangile ngombuzo wokuthi ungasusa kanjani i-bang, ngokuqinisekile uvele uzame futhi wazama ezinye izindlela. Kungasetshenziselwa ukwakha i-hairstyle. Isibonelo, uma ubopha u-braid "spikelets", khona-ke ukugqoka kufanele kuqale ngezinwele zezinwele, kancane kancane ubeke ezinye. Futhi uma uboya izinwele ukuze wenze ama-curls, khona-ke ibanga elide livele libuyele lapho lihlangana khona nengxenye enkulu yezinwele futhi ngeke lime, ikakhulukazi uma usebenzisa izindlela ezifanele zokwenza izitayela nokulungisa. Enye indlela elula kakhulu ukuhlukanisa izingoma zibe izingxenye ezimbili, okunye okufihlekile ngaphansi kwezinwele ezinde ezilenga ngakunye uhlangothi lwesimo. Ngokwemvelo, ngalokhu, udinga okungabonakali ukuyibeka ngokuphephile.
Kunezindlela ezilula ukuthi ungasusa kanjani i-bang, ngakho-ke kwakungeyona nje kuphela enhle futhi ehle, kodwa i- hairstyle yangempela yayivele.
Indlela eyodwa. Hlukanisa ama-bangs zibe ngamacu amaningana. Intambo ngayinye ishintshe ibe yi-flagellum, ibeke ikhanda libheke emgqeni bese libopha ngezinwele ezincane zezinwele, isibonelo, "amaqabunga".
Indlela emibili. Kuzo zonke izinwele, izingoma zingenza isisodwa esisodwa. Indlela oyifanele ngayo - kuxhomeke ekuthandweni kwakho nakuhlobo lobuso bakho. Ukukhiya kuzoba ne-barrette ponadezhnee, eyodwa engakwazi ukubamba izinwele ezinjalo ngokwethembeka.
Indlela yesithathu. Uma unezinwele ze-wavy eside , ungenza i-hairstyle yefantasy kusuka emaceleni ephikisiwe ngama-pigtails amancane. Kulesi simo, ama-bangs ahlukaniswe abe izingxenye futhi ahlanganiswe ngokuphelele kuma-pigtails.
Ngokuvamile, ucabanga ukuthi ungasusa kanjani i-bang ngendlela enhle neyokuqala, umuntu kufanele acabangele ukuthi abakhi bamuva abangeke bagxile kubunts. Mhlawumbe lokhu kubangelwa ukubuya kwemfashini phakathi nesikhathi sokuqala kwesigamu sesibili sekhulu lama-20. Amamodeli akhiwe ngesitayela se-Retro awawehla emasendeni, akhathalela izingubo nezitayela ezifashisayo. Yimaphi amathrekhi abadwebi abanikeza manje?
Manje ngisho nabaholi bezinwele abaholayo aboni lutho olungaphezu kwemvelo ekucubunguleni i-bang back. Ngesikhathi esifanayo, izinwele zezinwele, izinwele zezinwele nokubonakala, zifihliwe kancane kancane. Manje zifashini ukubonisa.
Enye i-retro hairdo efashisayo, ehlinzekwa ngabadwebi abahamba phambili - isitayela ngesitayela se-rockabilly. Ngokuvamile lokhu kuyisixazululo esihle uma uthanda lesi sitayela futhi ucabanga ukuthi ungasusa kanjani ama-bangs. Kulesi simo, i-combs kancane, iphakamisa iphinde iphinde iphindwe ngokulondoloza ivolumu.
Kwezinye izimo, ukushintsha ukuma kwama-bangs noma ukulahleka ngokuphelele kungashintsha ngokuphelele ukubukeka kwakho. Zonke izinketho ezingenhla zilungile ngoba zinikeza inkululeko yokuthatha izinyathelo futhi azibeki umcabango wakho. Ngempela, uma ungathandi indlela eyodwa, ukususa kanjani i-bang, ungazama enye, futhi mhlawumbe kusekelwe iseluleko sethu, uzothola isitayela sakho esiyingqayizivele.
Okukushoyo ukunakekela izinwele "Cieza" umphumela yokuvikela ngocwazi: izici kanye nokubuyekeza
Cosplay Perfect: Anime zezinwele nezici zabo
Izinwele isitayela naphakathi obuphelele
Iinsetjenziswa zokukhwela ukwaluka - ukuthi kuyini nokuthi ungayisebenzisa kanjani?
Indlela ukuthunga ingubo eyenziwe chiffon ngezandla
Chalazion leso elingenhla: izimpawu kanye nokwelashwa.
I ukuma lomthofu
Amabhlogo ukungena nakwamanye amazwe: izici, ngebuhle nebubi
Izimpawu sezulu esihle. Izimpawu ngcono isimo sezulu
Ensimini qualitatively otshaliwe - indlela ephumelelayo ulwe izinambuzane
Prednisolone: yokusetshenziswa, izakhiwo kwemithi
Yini okufanele ibe laminate ekhishini?